Budata Surfy Browser APK maka Android
Budata Surfy Browser
Budata Surfy Browser,
Ihe nchọgharị Surfy bụ ihe nchọgharị weebụ ọzọ ị nwere ike iji na ngwaọrụ mkpanaka gị nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ọ bụ ngwa ị nwere ike iji kama ihe nchọgharị ndabere gị nke nwere injin ya nwere ọgụgụ isi yana njiri mara ike.
Iji Surfy Browser, ngwa ị nwere ike iji ngwa ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ atụmatụ arụ ọrụ. Ngwa ahụ, nke nwere injin nwere ọgụgụ isi, nwere atụmatụ ahaziri ahazi maka gị. Site na ngwa ahụ, nke nwekwara atụmatụ bara ụba, ị nwere ike iji mkpịsị aka na-ahụ ọtụtụ ọrụ gị. Ị nwere ike ịlele ọtụtụ webụsaịtị notu oge, gbanwee netiti taabụ ma nwee ọ enjoyụ sọfụ ihuenyo zuru oke. Na ngwa, nke nwekwara a onwe nchọgharị atụmatụ, ị nwere ike ime gị azụmahịa na ị na-achọghị ka e dekọrọ na udo nke obi. Ị nwere ike ichekwa foto, rụọ ọrụ agụpụta ụda olu ekele maka asụsụ a na-asụ, ma rụọ ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ nụzọ dị mfe. Surfy Browser nwere isiokwu nwere ike ịhazi ya nke ọma,Notu oge ahụ, njirimara nchekwa na-ebute ụzọ.
Ụdị nchọgharị nkeonwe
Njirimara nbanye paswọọdụ
Ọgụgụ ibe nolu dara ụda
Ị nwere ike ibudata ihe nchọgharị Surfy nefu.
Surfy Browser Ụdịdị